Codsiyadii la geeyey Xafiiska Kheyre oo aan la kala furin iyo lama filaan kale oo dhici rabo - Caasimada Online
Home Warar Codsiyadii la geeyey Xafiiska Kheyre oo aan la kala furin iyo lama...
Codsiyadii la geeyey Xafiiska Kheyre oo aan la kala furin iyo lama filaan kale oo dhici rabo
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa weli socoto ololaha lagu raadinayo xilka wasiirada la filayo inuu Ra’isulwasaare Xasan Cali Kheyre soo magacaabo dhawaan iyadoo ay sii kordheyso codsiyada la geynayo Xafiiskiisa.
Xafiiska Ra’isulwasaaraha ayaa waxaa la geeyey codsiyo kor u dhaafayo ilaa 350 codsi oo lagu doonayo wasiir taasoo noqotay tii ugu badneyd ee ebed ka dhacdo Soomaaliya.
Haddaba xog ay heshay Caasimadda Online ayaa xaqiijineyso inay mar kale golaha wasiirada laga arki doono lama filaankii ka dhacday magacaabista Ra’isulwasaaraha Soomaaliya oo uu Maxamed Cabdulaahi Farmaajo si aan la fileyn ugu magacaabay Xasan Cali Kheyre.
Wararka ayaa sheegayo inaan weli la kala furin codsiyadii la geeyey xafiiska Ra’isulwasaaraha taasoo muujineyso in lasoo magacaabi doono shaqsiyaadka codsiyada geystay kuwa aan aheyn.
Madaxweynaha iyo Ra’isulwasaaraha ayaa qorshe u dagay siyaasiyiinta doonayaan xilka wasiirnimo waxayna u sheegayaan inay codsiyadooda geystaan xafiiska Ra’isulwasaaraha markii la geeyana lama aqrinayo.
Shaqsiyaadka ugu magaca weyn ayaa loo sheegayaa in lasoo wici doono sidoo kalana ay ku jiraan Short list-ga ama dadka isha gaarka ah lagu eegi doono taasina waxay u muuqataa qorshe siyaasadeed.
Dadka ku dhaw dhaw xafiiska Ra’isulwasaaraha ayaa sheegayo inay golaha wasiirada ka dhici doonto lama filaanki ka dhacday magacaabista golaha wasiirada waxaana la rajeenayaa in lasoo magacaabi doono shaqsiyaadka had xusul duubka ugu jiro kuwa aan aheyn.